တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ကို… မြန်မာအက …သင်ပေးနေတဲ့ ဖိုးချစ် – ရွှေအလင်း
တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ကို… မြန်မာအက …သင်ပေးနေတဲ့ ဖိုးချစ်
ပ ရိ သတ် အားပေးမှုအခိုင်အမာ ရရှိထားပြီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် သဘင် ဘောလုံး စတဲ့အရာတွေကို အားတက်သရော လိုက်လံ လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သဘင်အစည်းအရုံးရဲ့ ဥက္ကဌ မြို့ရွှေမန်းသား ဖိုးချစ်ကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ကို မြန်မာအက သင်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုအပိုင်းကို အစိုးရ ထောက်ပံ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံက ယဉ်ကျေးမှုအပိုင်းကို ထောက်ပံ့မှု မပေးဘူးဆိုတဲ့ အခြေအနေက မြန်မာနိုင်ငံ ထက် အဆ ၁၀၀ လောက်သာ နေတယ်လို့ ဖိုးချစ်က ပေါ်ပြူလာရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ဖိုး ချစ် က “နိုင်ငံရဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု အပြင် ကျွန်တော်တို့ သွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ ရတယ်။ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုလည်းရတယ် နောက်နီးစပ်မှုလည်း အများကြီးရှိခဲ့တော့ အဲ့မှာ တွေ့ကြုံခဲ့ရတာ သူတို့နဲ့ နှီးနှောဖလှယ်ရင်းနဲ့ မြန်မာ့သဘင်ပေါ့နော် အကျိုးဖြစ်မယ့် ကဏ္ဍတွေ တိုးတက်မယ့်ကဣတွေကို မြင်ရပါတယ်။ နောက်ပူးပေါင်းပြီးတော့ ထက်ပြီးတော့ လုပ်စရာလေးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။”လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
သူ တို့ ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုက နီးစပ်မှုရှိလားလို့မေးမြန်းရာ “နီးစပ်တဲ့ အပိုင်းရှိသလို ကွဲပြားမှုလည်း အများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ဆီမှာက မြန်မာနိုင်ငံလိုပြောရင်တော့ သဘင်ပေါ့ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းကို သိမ်းထားတာ များတယ်။ ဥပမာပေါ့ သုံးတဲ့ ပစ္စည်းတွေ နည်းပညာအရ တိုးတက်သွားပေမယ့် သူတို့ယဉ်ကျေးမှု တန်ဖိုးကတော့ ဒီအတိုင်းပဲ သိမ်းထားတယ် အဲ့တာလေးကိုပဲ တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံလည်း ဒါက ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ ပါပြီးသားပေါ့။ အဲ့အတိုင်းပဲ လုပ်ရမှာ ပစ္စည်းတွေက နည်းပညာမြင့်ကောင်းမြင့်ပေမယ့် မူလတန်ဖိုးကိုတော့ မပျက်အောင်တော့ ထိန်းရတယ်။”လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
သူ တို့ နိုင် ငံမှာ ယဉ်ကျေးမှုအပိုင်းကို အစိုးရက ဘယ်လို ပံ့ပိုးတာရှိလဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာရော ဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးလဲလို့ မေးမြန်းရာ “ဒီအကြောင်းပြောရရင် တစ်မျိုးတော့ တစ်မျိုးပဲ ဒါပေမဲ့ နံပါတ်တစ် ပြောလိုတာက သူတို့က အင်အားကြီး နိုင်ငံ အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တော့ သူတို့နိုင်ငံက ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ မပံ့ပိုးပါဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးဆိုရင်တောင်မှ ကျွန်တော်တို့ဆီထက် အဆ ၁၀၀ လောက်သာနေပြီ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်း Government အပိုင်းကတော့ လုပ်စရာကိုင်စရာတွေနဲ့ နိုင်ငံပြုပြင်စရာတွေ အများကြီးပေါ့နော်။
ဖာ စ ရာေ ထး စရာတွေရော ယိုပေါက်တွေရော ကဏ္ဍတွေက သိပ်များတဲ့ အခါကျတော့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတည်းကိုတော့ Highlight ပေးပြီးတော့ ထူးထူးခြားခြားကြီးတော့ လုပ်ဖို့တော့ လောလောဆယ်တော့ သိပ်မတွေ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် နဲ့တွေတဲ့အခါမှ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ကူညီဖို့အတွက် လမ်းကြောင်းတွေ ပေးတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ သဘင်ရုံးနဲ့ ပတ်သက်ရင် မကြာခင်မှာ စာတင်မယ် သဘင်ရုံးနဲ့ပတ်သက်ရင် လုပ်ပေးပါမယ်လို့ ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ ပြောလိုက်တာတွေရှိတယ်။ ဒါကအခြေခံလေးတွေပေါ့။ လက်ရှိအနေအထားကတော့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ဘယ်လိုမှ မယဉ်နိုင်ပါဘူး။”လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတျအားပေးမှုအခိုငျအမာ ရရှိထားပွီး ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ သဘငျ ဘောလုံး စတဲ့အရာတှကေို အားတကျသရော လိုကျလံ လုပျဆောငျပေးနတေဲ့ မွနျမာနိုငျငံ သဘငျအစညျးအရုံးရဲ့ ဥက်ကဌ မွို့ရှမေနျးသား ဖိုးခဈြကတော့ လကျရှိအခြိနျမှာ တရုတျယဉျကြေးမှု အဖှဲ့ကို မွနျမာအက သငျပေးလကျြရှိနပေါတယျ။ တရုတျနဲ့ မွနျမာ ယဉျကြေးမှုအပိုငျးကို အစိုးရ ထောကျပံ့အကွောငျးနဲ့ပတျသကျပွီး တရုတျနိုငျငံက ယဉျကြေးမှုအပိုငျးကို ထောကျပံ့မှု မပေးဘူးဆိုတဲ့ အခွအေနကေ မွနျမာနိုငျငံ ထကျ အဆ ၁၀၀ လောကျသာ နတေယျလို့ ဖိုးခဈြက ပျေါပွူလာရဲ့ အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ဖိုးခဈြက “နိုငျငံရဲ့ ခဈြကွညျရငျးနှီးမှု အပွငျ ကြှနျတျောတို့ သှားရောကျဖြျောဖွခေဲ့တဲ့ အတှအေ့ကွုံကောငျးတှေ ရတယျ။ ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုလညျးရတယျ နောကျနီးစပျမှုလညျး အမြားကွီးရှိခဲ့တော့ အဲ့မှာ တှကွေုံ့ခဲ့ရတာ သူတို့နဲ့ နှီးနှောဖလှယျရငျးနဲ့ မွနျမာ့သဘငျပေါ့နျော အကြိုးဖွဈမယျ့ ကဏ်ဍတှေ တိုးတကျမယျ့ကဣတှကေို မွငျရပါတယျ။ နောကျပူးပေါငျးပွီးတော့ ထကျပွီးတော့ လုပျစရာလေးတှလေညျး ရှိပါသေးတယျ။”လို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ယဉျကြေးမှုနဲ့ မွနျမာ့ယဉျကြေးမှုက နီးစပျမှုရှိလားလို့မေးမွနျးရာ “နီးစပျတဲ့ အပိုငျးရှိသလို ကှဲပွားမှုလညျး အမြားကွီးရှိတယျ။ သူတို့ဆီမှာက မွနျမာနိုငျငံလိုပွောရငျတော့ သဘငျပေါ့ သူတို့ယဉျကြေးမှုတိုငျးကို သိမျးထားတာ မြားတယျ။ ဥပမာပေါ့ သုံးတဲ့ ပစ်စညျးတှေ နညျးပညာအရ တိုးတကျသှားပမေယျ့ သူတို့ယဉျကြေးမှု တနျဖိုးကတော့ ဒီအတိုငျးပဲ သိမျးထားတယျ အဲ့တာလေးကိုပဲ တနျဖိုးရှိရှိအသုံးပွုတယျ။ ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံလညျး ဒါက ကြှနျတျောတို့ ရညျရှယျခကျြထဲမှာ ပါပွီးသားပေါ့။ အဲ့အတိုငျးပဲ လုပျရမှာ ပစ်စညျးတှကေ နညျးပညာမွငျ့ကောငျးမွငျ့ပမေယျ့ မူလတနျဖိုးကိုတော့ မပကျြအောငျတော့ ထိနျးရတယျ။”လို့ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
သူတို့နိုငျငံမှာ ယဉျကြေးမှုအပိုငျးကို အစိုးရက ဘယျလို ပံ့ပိုးတာရှိလဲ မွနျမာနိုငျငံမှာရော ဘယျလိုပံ့ပိုးပေးလဲလို့ မေးမွနျးရာ “ဒီအကွောငျးပွောရရငျ တဈမြိုးတော့ တဈမြိုးပဲ ဒါပမေဲ့ နံပါတျတဈ ပွောလိုတာက သူတို့က အငျအားကွီး နိုငျငံ အငျမတနျခမျြးသာတဲ့ နိုငျငံဖွဈတော့ သူတို့နိုငျငံက ဒါနဲ့ပတျသကျလို့ မပံ့ပိုးပါဘူးဆိုတဲ့ အနအေထားမြိုးဆိုရငျတောငျမှ ကြှနျတျောတို့ဆီထကျ အဆ ၁၀၀ လောကျသာနပွေီ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံမှာလညျး Government အပိုငျးကတော့ လုပျစရာကိုငျစရာတှနေဲ့ နိုငျငံပွုပွငျစရာတှေ အမြားကွီးပေါ့နျော။
ဖာစရာထေးစရာတှရေော ယိုပေါကျတှရေော ကဏ်ဍတှကေ သိပျမြားတဲ့ အခါကတြော့ ယဉျကြေးမှုတဈခုတညျးကိုတော့ Highlight ပေးပွီးတော့ ထူးထူးခွားခွားကွီးတော့ လုပျဖို့တော့ လောလောဆယျတော့ သိပျမတှဘေူ့း။ ဒါပမေဲ့ နိုငျငံတျောရဲ့ အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျ နဲ့တှတေဲ့အခါမှ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျက ကူညီဖို့အတှကျ လမျးကွောငျးတှေ ပေးတယျ။ ဥပမာ ကြှနျတျောတို့ သဘငျရုံးနဲ့ ပတျသကျရငျ မကွာခငျမှာ စာတငျမယျ သဘငျရုံးနဲ့ပတျသကျရငျ လုပျပေးပါမယျလို့ ကွညျကွညျနူးနူးနဲ့ ပွောလိုကျတာတှရှေိတယျ။ ဒါကအခွခေံလေးတှပေေါ့။ လကျရှိအနအေထားကတော့ တရုတျနိုငျငံနဲ့ ဘယျလိုမှ မယဉျနိုငျပါဘူး။”လို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
“ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုထက် ပိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ မင်္ဂလာဒုံကသမီးလေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု”
နုတ်ထွက်စာတင်ထားတဲ့.. ကျောင်းဆရာလေး တဦးရဲ့…ရင်ဖွင့်သံ (တိုင်းပြည်အတွက် နစ်နာလှပါတယ်)
ကောလင်းမြို့နယ်မှာ… ရွှေတွေပေါ်လို့ …အလုအယက်တူးယူနေကြတဲ့…. ဗွီဒီယို…
ဖိုက်ဘာစက်လှေများ တင်ဆောင်ပြီး ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့်...
တကယ်ကြွေမိသော ချမ်းမင်းရဲထွဋ်ရဲ့ အကယ်ဒမီ ပွဲတက် Fashion…! မိုက်တယ်နော်
“မင်းသားကြီး ဦးစောနိုင်(ရှမ်းပြည်) (ခ) ဦးဇင်း စန္ဒိမာရဲ့...
၃ လသာခံမည်ဟု ခန့်မှန်းခံရသောလည်း ကင်ဆာလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့သည့် အသည်းကင်ဆာရှင်...